I-Sugar Bach-I-Sweet Beach Retreat - I-Airbnb
I-Sugar Bach-I-Sweet Beach Retreat
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSherrie
I-Sugar Bach yindlu yokulala eyi-2 ene-bach evulekileyo yokuphumla / indawo yokutyela, ikhitshi yegalari, igumbi lokuhlambela kunye nentendelezo yabucala. Isanda kulungiswa ngokuhonjiswa elunxwemeni ikwenza uzive usekhaya. Sizibonelela ngesidlo sakusasa selizwekazi le-continental kwi-Sugar Bach equka i-cereal, iziqhamo ezinkonkxiweyo, i-toast kunye ne-spreads.
Xa sathenga iSugar Bach yayidinga uthando. NgeSugar kunye neSpice siye sayilungisa sayilungiselela uMama. Kwakuyinto yethu yokuthatha i-retro kiwi bach kunye nokuziva ekhaya. Uye waqhubela phambili kwaye ngoku sabelana ngayo nabo bafuna ukuva uluntu oluhle lwe-Opunake.
Ibekwe ngasemva kwipropathi yethu enentendelezo yabucala ene-bbq, imifuno emitsha kunye nesidlo sangaphandle.
Sisembindini we-Opunake kwaye sikwakuhambo olufutshane lwemizuzu emi-5 ukuya kunxweme oluphambili, ichibi, igadi yoluntu kunye ne-Opunake Walkway.
4.85 · Izimvo eziyi-136
I-Sugar Bach ibekwe kwi-Surf Highway 45, unokuthatha ikofu kwi-Dreamtime Surf Shop, khangela enye yeendawo ezininzi ze-studio zamagcisa asekuhlaleni okanye ubambe i-bite ukuze utye kwi-Headlands Restaurant ezantsi kwendlela.
Ukuba ungaphandle kwaye ujonge i-Opunake Walkway okanye ujonge ezantsi elunxwemeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Sherrie
Siyindawo nje yokulahla ilitye kwindlu enkulu kwaye silapha ukuze siqinisekise ukuba ufumana okuninzi kokuhlala kwakho. Ukuba kukho into oyifunayo ungoyiki ukubuza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Opunake